संस्कृत भाषा र हिन्दूकरणको रणनीति Global TV Nepal
आइतवार, अशोज १०, २०७८ Sunday 26th September 2021
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक :अध्यादेशको समस्या समाधान गर्ने र सरकारलाई चाँडो पूर्णता दिने एमाले बैठक : विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित तीन दस्तावेजमा छलफल साफ च्याम्पियनसिप लागि नेपाली टिमको घोषणा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिन काठमाडौंमा प्रदर्शन वर्षाले क्षति भएका सडकको निर्माण दशैँअघि सम्पन्न गर्न विकास समितिको निर्देशन मोडल रामशरणले ल्याए ‘सँगसँगै बसेर रुन मन छ’ (भिडियो सहित) ८ सय ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १ हजार २ सय ७९ संक्रमणमुक्त प्रितिबाट युनिकोड | युनिकोडबाट प्रिति
संस्कृत भाषा र हिन्दूकरणको रणनीति
ग्लोवल टि.भी. बुधबार, अशोज २८, २०७७ 0
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालसालै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रयोजनका लागि प्रश्नावली स्वीकृत गरेको सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्रश्नावलीको व्यक्तिगत विवरण भाग अन्तर्गत ३.७, ३.८ र ३.९ मा क्रमशः पुर्खाको भाषा, मातृभाषा र दोस्रो भाषा कुन हो ? भन्ने प्रश्न राखिएको छ । नेपालका आदिवासी जनजातिको पुर्खाको भाषा भन्नु नै मातृभाषा नै हो । तर खस आर्यका लागि मातृभाषा भन्नु ‘खस नेपाली’ हो भने पुर्खाको भाषा ‘संस्कृत’ हो । यहाँनेर राज्यले संस्कृत भाषा स्थापित गर्नकै लागि यो प्रश्न राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यति मात्र होइन सरकारले संस्कृत भाषा स्थापित गर्न शैक्षिक क्षेत्रमा समेत जबरजस्ती घुसाउँदै छ । केही महिनाअघि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले संस्कृत विषयलाई आगामी शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै कक्षा एकदेखि ऐच्छिक विषयको रूपमा पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय ग¥यो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका (पाविके) निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईका अनुसार “अब प्रत्येक विद्यालयमा कक्षा आठसम्मको पाठ्यक्रममा संस्कृत भाषा अध्ययन समावेश गर्नुपर्ने छ र यसका लागि पुस्तक तयार पारिँदै छ । कक्षा एकमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि संस्कृत अध्ययन गराइँदैछ” ।
आखिर मृत संस्कृत भाषालाई सरकारले किन स्थापित गर्न खोज्दै छ ? किन पुनः प्राथमिकता दिँदै छ ? यो आजको आवश्यकता हो त ? मृत भाषा किन अन्यमाथि लादिँदै छ ? यी प्रश्न भाषा तथा बौद्धिक क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको छ । यस लेखमा संस्कृत भाषाको सामाजिक–राजनीति पक्षबारे केलाउने जमर्को गरिएको छ ।
संस्कृत: ब्राह्मण पहिचान संरक्षणको राजनीति
संस्कृत भाषालाई व्यावहारिक रूपमा केलाउँदा यो जाति विशेषको भाषा हुन आउने देखिन्छ । हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा देख्दै आएको कुरा के हो भने संस्कृत भाषा हिन्दू ब्राह्मणले धार्मिक, सांस्कृतिक, अनुष्ठान, रीतिरिवाजको बेला प्रयोग गर्ने गर्छन् । हिन्दु परम्पराअनुसार गरिने प्रत्येक धार्मिक रीतिरिवाज जस्तै विवाह, मृत्यु संस्कार, श्राद्ध, पूजाआजामा संस्कृत भाषामा लेखिएका श्लोक, मन्त्रहरू उपयोग गरिन्छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक कर्मकाण्ड यज्ञ हवन्मा संस्कृत जोडिएको छ । अतः संस्कृतको सीधा सम्बन्ध हिन्दू ब्राह्मणको जीवनपद्वतिसँग जोडिएको छ । वास्तवमा संस्कृत हिन्दू ब्राह्मणका धार्मिक सांस्कृतिक पहिचानको मानक हो ।
नेपाल र भारतमा संस्कृतको अभ्यास हेर्दा ब्राह्मण समुदायले यो भाषालाई आफ्नै जातीय पेवाको रूपमा लिँदै आएको छ । अझै पनि दलित समुदायलाई संस्कृत पढाइ हुने स्थानमा भर्ना दिइँदैन । हालसालै बागलुङको मुक्तिनाथ गुरुकुलमा दलित तथा जनजातिका छोराछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्दा स्थानीय ब्राह्मण समुदायले “गुरुकुलमा संस्कृतपढ्न दिइँदैन बरु सेरिन तयार छौैँ” भने ।
नेपाल र भारतमा संस्कृतको अभ्यास हेर्दा ब्राह्मण समुदायले यो भाषालाई आफ्नै जातीय पेवाको रूपमा लिँदै आएको छ । अझै पनि दलित समुदायलाई संस्कृत पढाइ हुने स्थानमा भर्ना दिइँदैन । हालसालै बागलुङको मुक्तिनाथ गुरुकुलमा दलित तथा जनजातिका छोराछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्दा स्थानीय ब्राह्मण समुदायले “गुरुकुलमा संस्कृतपढ्न दिइँदैन बरु सेरिन तयार छौैँ” भने । आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि झापाको भद्रपुरस्थित श्रीकृष्ण द्वै्रपायन गुरुकुल वेद विद्याश्रमको प्रशासनले एक विद्यार्थीलाई दलित भएकै कारण भर्ना नलिएका कुरा सञ्चार माध्यममा आएको थियो । विद्यालयका प्रधानाध्यापकले उपाध्याय ब्राह्मणहरू मात्र यस विद्यालयमा सामेल हुन सक्ने बताएका थिए । नेपाली राज्यमा संस्कृत कुन जातिको पेवा हो भन्ने कुराको वर्णन गर्न यी दुई घटना काफी छन् ।
हाल राज्य सञ्चालक पनि हिन्दु खस आर्य ब्राह्मण क्षत्री रहेको हुँदा उनीहरु आफ्नो हिन्दू धर्म संस्कृति रक्षाका लागि जोडदार रूपमा लागि रहेका छन् । त्यसकारण हाल राज्यले संस्कृत भाषा स्थापित गर्न खोज्नु पहिचानको राजनीति बाहेक अरू केही हुन सक्दैन । तर राज्यले आफ्नै एकल जातीय पहिचानका रक्षाका लागि अन्य भाषिक समुदायमाथि संस्कृत लाद्नु सरासर अन्याय हो, अपराध हो ।
संस्कृतको सामाजिक अर्थ–राजनीति
पछिल्लो समयमा पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव, जीविकामा आएको परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा अन्य भाषाको प्रभुत्व, आधुनिकतासँगै युवा पुस्तालाई संस्कृतप्रति लगाव छैन । उदाहरणको रूपमा विद्यार्थीले छनोट गर्ने भाषाबाट पनि पुष्टि हुन्छ । जापानी, चिनियाँ, अङ्ग्रेजी, कोरियन, जर्मनी भाषा सिक्ने, पढ्ने जमात बढ्दो छ । यी भाषाको माग बजारकेन्द्रित भएकाले आकर्षण बढेको हो । जबकि संस्कृत भाषा सिक्ने विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्था छ । संस्कृत भाषाको ज्ञान भएका परिवारले समेत हाल आफ्ना बालबच्चालाई यस भाषा पढ्नमा प्रेरित गर्दैनन् । संस्कृत पढ्न छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीले समेत बीचमा पढाइ त्याग्छन्, बजारमा माग नभएका कारण । यस्तो अवस्था देखिँदा देखिँदै राज्य किन संस्कृत भाषा स्थापित गर्न खोज्दै छ ?
जापानी, चिनियाँ, अङ्ग्रेजी, कोरियन, जर्मनी भाषा सिक्ने, पढ्ने जमात बढ्दो छ । यी भाषाको माग बजारकेन्द्रित भएकाले आकर्षण बढेको हो । जबकि संस्कृत भाषा सिक्ने विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्था छ । संस्कृत भाषाको ज्ञान भएका परिवारले समेत हाल आफ्ना बालबच्चालाई यस भाषा पढ्नमा प्रेरित गर्दैनन् । संस्कृत पढ्न छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीले समेत बीचमा पढाइ त्याग्छन्, बजारमा माग नभएका कारण । यस्तो अवस्था देखिँदा देखिँदै राज्य किन संस्कृत भाषा स्थापित गर्न खोज्दै छ ?
अहिले ज्ञानविज्ञान भण्डार बुझ्न संस्कृत पढ्नु पर्ने तर्क जो अगाडि सारिएको छ त्यो हिन्दु अतिवादीहरु चलाएको एक भ्रम मात्र हो । यसको तथ्य कसैले प्रमाणित गरेको छैन । आजको मितिसम्म कुनै वैज्ञानिकले संस्कृत भाषा पढेर आविष्कार गरेको रेकर्ड छँदै छैन । यथार्थ के हो भने यिनीहरु जनतालाई संस्कृत भाषाको प्रयोगबाट बृहत् पक्षमा फाइदा हुने देखाउने तर हिन्दु कर्मकाण्डमा आफूहरु मात्रै सीमित हुने यिनको सुनियोजित रणनीति मात्र हो ।
संस्कृतको प्रयोग हिन्दु ब्राह्मणले गरेसँगै भाषाको प्रयोगबाट दीर्घकालमा समाजिक–आर्थिक लाभ पनि इतिहासमा झैँ सोही समुदायलाई नै पुग्ने देखिन्छ । आज पनि विद्यालयमा संस्कृत भाषा पठनपाठन गरिँदा ब्राह्मण समुदायलाई सीधै फाइदा पुग्ने निश्चित छ । संस्कृत भाषामा जाने बुझेको जमात ब्राह्मण समुदायभित्र मात्र छ । विद्यालयमा संस्कृत पठन पाठन हुना साथ नेपाल भरिका विद्यालयमा ब्राह्मण शिक्षककै एकल भर्ती हुने निश्चित छ ।
हुन त कतिपयले केही दलित तथा आदिवासीले संस्कृतमा वेदका हरफ वाचन गरेको भिडियो प्रसार गरेर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको सन्देश दिइने प्रयास पनि गरिएला । संस्कृत भाषा सबैको साझ सम्पत्ति हो भन्ने तर्क अगाडि सारिएला । तर यसभित्रको एकल जातीय रवैया, वर्चस्व (हेजेमोनी), भाषिक औपनिवेशको उत्तर कसले दिने ? आजको मितिसम्म संस्कृत पढेजानेका दलित जनजातिलाई बोलाएर कति ब्राह्मणले आफ्नो घरमा धार्मिक कार्य गर्न लगाए ? कति बाहुन क्षत्रीले विवाह व्रतबन्धमा दलित पण्डितबाट सम्पन्न गराए ? दलित समुदायलाई संस्कृत भाषा पढ्न दियौँ भनेर हल्ला पिट्ने तागाधारी समुदायले संस्कृत पढेका दलितको मन्त्र कति सुने, कतिलाई यज्ञ हवन गर्न दिए होलान् ? उत्तर स्पष्ट छ, एकजना पनि संस्कृत पाठ गर्न जान्नेलाई उनीहरुले स्वीकार गरेका छैनन् ।
आजको मितिसम्म संस्कृत पढेजानेका दलित जनजातिलाई बोलाएर कति ब्राह्मणले आफ्नो घरमा धार्मिक कार्य गर्न लगाए ? कति बाहुन क्षत्रीले विवाह व्रतबन्धमा दलित पण्डितबाट सम्पन्न गराए ? दलित समुदायलाई संस्कृत भाषा पढ्न दियौँ भनेर हल्ला पिट्ने तागाधारी समुदायले संस्कृत पढेका दलितको मन्त्र कति सुने, कतिलाई यज्ञ हवन गर्न दिए होलान् ?
मानौँ भविष्यमा कोही दलित विद्यार्थीले संस्कृतमा उच्च शिक्षा हासिल गरे भने, के ब्राह्मण समुदायले वा पुरोहितहरू शिक्षकका रूपमा स्वीकार्लान् ? पक्कै बहिष्कार गर्नेछन् । किनभने अझै पनि नेपाली समाजमा जात–भात जब्बर छ । यो समाजले संकृत पढ्ने हिन्दु ब्राह्मणबाहेक अरू कसैलाई सोच्न सक्ने अवस्थामा छैन । हिन्दु कर्मकाण्ड दलित वा अन्य जातिले गर्न पाउने सुनिश्चित राज्यले नगर्दासम्म र यी गतिविधि समाजले स्वीकार नगरेसम्म संस्कृत पठनपाठनको विषय हुनै सक्दैन ।
पाविकेलाई यो पनि थाह हुन जरुरी छ, वर्तमान पाठ्यक्रम दलितका लागि विभेदकारी छ । लेखकद्वयमध्ये एकले कक्षा एकदेखि १० सम्म पढाइ हुने सामाजिक शिक्षा विषयको पाठ्यक्रम विश्लेषण गर्दा नेपाली समाजको यथार्थ झल्किने विषयवस्तु नरहेको ठहर थियो (वर्ण–व्यवस्था मलजल गर्ने शिक्षा, भाद्र २९, २०७५, कान्तिपुर) । उनका अनुसार पाविके छुवाछुतबारे पाठ्यक्रममा समावेश गरे पनि यसको जननी स्रोत हिन्दू वर्णव्यस्थाबारे मौन छ । पाठ्यक्रमले अप्रत्यक्ष रूपमा जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गरेको लेखमा दाबी छ । यसरी नेपालको शिक्षा प्रणाली हिन्दू पौराणिक मूल्य मान्यताबाट निर्दिष्ट हुँदै आएको बेला हालसालै पाविकेले कक्षा एकबाटै संस्कृत भाषा लाद्नुले दलित समुदायमाथि थप विभेद हुने निश्चित छ ।
त्यसो त पाविकेले नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षाका लागि संविधानको पालना गरेको भन्ला । तर के धर्म संस्कृतिको रक्षाको नाममा उचनिच, अन्धविश्वास र कुरीतिले भरिभराउ धार्मिक परम्परालाई ‘अन्य’ माथि लाद्न पाइन्छ र ? साहित्यकार दीपक विश्वकर्मा भन्छन्, संस्कृतमा लेखिएका “वेदका हरफहरू कक्षा कोठामा घन्काएर मानिसलाई अन्धकारमा धकेल्न पाइँदैन । भाषाको रूपमा पढाइयोस्, धर्म र संस्कृतिको नाममा होइन ।” त्यसो त संस्कृत भाषा अहंकारी विखण्डनकारी रीतिरिवाजलाई प्रश्रय गर्ने प्रकृतिको छ । हिन्दु कट्टरपन्थी वा सामन्तले बोल्ने भाषा आम रूपमा लेखपढको वा कामकाजको भाषा हुनै सक्दैन । आजको परिवर्तशील समाजमा यस्ता कुरीतिले भरिभराउ भाषालाई स्थापित गराउनु दलित तथा आदिवासीका लागि घोर अन्याय हुन आउँछ । दीर्घकालमा यसले समाजलाई विखण्डन तथा विद्रोहको बाटोमा डोर्याउँछ ।
संस्कृतः सत्तामाथि वर्चस्व कायम राख्ने रणनीति
कुनै पनि शासन व्यवस्था टिकाउन धर्म संस्कृतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालको शासक वर्गले शासन सत्ता जोगाउन सुरुवातदेखि हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई उच्च प्राथामिकता दिँदै आएको इतिहस छ । राज्यबाट फाइदा लिएकाले मात्र हिन्दू धर्म संस्कृतिको पक्षमा वकालत गरेको देखिन्छ । पञ्चायत व्यवस्था यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहारण हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले जब निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य ग¥यो तब पञ्चायतले काखी च्यापेको हिन्दू सङ्घसंस्थाहरू त्रसित भए । सदियौँदेखि खाईपाई आएको भाग गुम्ने निश्चित भएपछि विभेदकारी जमातले हिन्दू धर्म, संस्कृति जोगाउने रणनीतिस्वरूप राज्यलाई दबाब दिन थाले । उदाहरणका लागि विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल तथा संस्कृतमुखी सङ्घसंस्थाहरूले २०४९ साल वरिपरि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई संस्कृत भाषा कक्षा चारदेखि स्नातक तहसम्म अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्दै दबाब दिएका थिए । तत्कालीन समयमा मानव अधिकारवादी अगुवा पद्मरत्न तुलाधरले एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा संस्कृत भाषाको माध्यमबाट हिन्दुवादीले दलित समुदायमाथि जातभात लाद्न र जनजाति समुदायको भाषा संस्कृतिलाई कमजोर पार्न ल्याइएको रणनीति हो भनेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संस्कृत विषयको पठनपाठन हटाइएको थियो । सोही क्याविनेटमा मन्त्री भएका जनजाति नेता गोरेबहादुर खपाङ्गीको पहलले निमाविसम्म अनिवार्य रूपमा पठनपाठन भइरहेको संस्कृत विषय हटाइएको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका समुदायहरूलाई ब्राह्मण क्षत्रीको राज्यसत्ताबाट आफूहरूलाई कसरी पाखा लगाउँदै आइएको छ भन्नेबारे चेत पलाएको छ । यस चेतसँगै विशेषतः राज्यसत्ताबाट लाभ लिँदै आएको खसआर्य समुदाय डराएको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका समुदायहरूलाई ब्राह्मण क्षत्रीको राज्यसत्ताबाट आफूहरूलाई कसरी पाखा लगाउँदै आइएको छ भन्नेबारे चेत पलाएको छ । यस चेतसँगै विशेषतः राज्यसत्ताबाट लाभ लिँदै आएको खसआर्य समुदाय डराएको छ । उसलाई हिन्दू धर्म संस्कृतिको रक्षा नगरे आफूले पाएको जातीय लाभ गुम्ने डर थियो । यसैकाराण उसले पहिलो संविधान सभा विफल पार्याे । हाल हिन्दु धर्म संस्कृति जोगाउन आधार स्थापना गर्न सुनौलो राजनीतिक अवसर मिलेको छ ।
राज्यमा संस्कृत भाषा विकास गर्न सकिएमा हिन्दु मूल्य मान्यता, रीतिरिवाज, प्रवृत्तिको रक्षा हुन्छ । हिन्दु धर्मभित्रको अन्धविश्वास कायम रहन्छ । हिन्दु धर्मका कारणले शोषणमा परेका आदिवासी जनजाति, दलित मुस्लिम लागायतका समुदायमा विभेद, दमन कायम गरिराख्न शासकहरूलाई यस्तै भाषा संस्कृतिले टेवा पुर्याउँछ । जातभात कायम गर्ने र एकल जातीय शासन कायम गर्ने राज्यसत्ताको रणनीति संस्कृत भाषासँग जोडिएको छ । भलै अहिले संस्कृतलाई ऐच्छिक विषय भनिएको छ । तर उद्देश्य अनिवार्य विषय बनाउने देखिन्छ । ठ्याक्कै पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो नेपाललाई ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ बनाउने खस आर्यको रणनीति कायमै छ । समग्रमा भन्नु पर्दा, संस्कृत भाषा राज्यमा स्थापना गरेर राजनीतिक लाभ लिने, सत्ता वरिपरि रमाउने र बहिष्कृत–सीमान्तकृत समुदायहरूलाई चुस्ने खस आर्य शासकको दीर्घकालीन योजना छ । यो सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायले प्रष्ट बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा मृतप्रायः संस्कृत भाषा कसैको मातृभाषा नभएको र यसको प्रयोग नगण्य मात्रामा भएकाले यस भाषामाथि लगानी गर्नु फगत हुन्छ र परिणामविहीन हुन्छ । हिन्दु अतिवादि र पुरातनवादी रुढिवादी सोच चाहना भएका व्यक्तिहरूबाहेक अन्य जनमानसमा संस्कृत भाषाको उपयोगिता र औचित्य अहिलेको आधुनिक समाजले एकरत्ति देखेको छैन । यतिबेला नेपाली राज्य पुनः एकपटक एकल जातीय, उच्च जातीय अहंकारवादी हिन्दुवादी प्रवृत्तिलाई सहयोग पुग्ने गरी संस्कृत भाषा स्थापित गर्न खोज्दै छ । वास्तवमा, हिन्दुवादी–बाहुनवादी नीतिलाई सरल र प्रभावकारी रूपमा विकास गर्ने र हिन्दु शासन सत्ता टिकाइ राख्न हिन्दु ब्राह्मण शासककै रणनीतिस्वरूप संस्कृत भाषालाई रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको प्रष्टै बुझिन्छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक :अध्यादेशको समस्या समाधान गर्ने र सरकारलाई चाँडो पूर्णता दिने
एमाले बैठक : विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित तीन दस्तावेजमा छलफल
साफ च्याम्पियनसिप लागि नेपाली टिमको घोषणा
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिन काठमाडौंमा प्रदर्शन
वर्षाले क्षति भएका सडकको निर्माण दशैँअघि सम्पन्न गर्न विकास समितिको निर्देशन
भारतीय विदेशसचिव श्रृंगला काठमाडौं आइपुगे
तनुहँमा ट्रक दुर्घटना हुँदा १ को मृत्यु
उखु किसानको रकम एक महिनाभित्र भुक्तानी गर्न सर्वोच्चको आदेश
आमसभा कस्तो हुन्छ ?, प्रर्दशनीमार्गमा हेर्न आउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई झलनाथ खनालको आग्रह #LiveUpdat
राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै राप्रपा प्रर्दशनमा
मोडल रामशरणले ल्याए ‘सँगसँगै बसेर रुन मन छ’ (भिडियो सहित)
८ सय ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १ हजार २ सय ७९ संक्रमणमुक्त
विद्यार्थी बिरामी भएपछि पर्वतका दुई विद्यालय बन्द